प्रचार ख्रीष्टको, तिनीहरूबाट महिमा देखाउन — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
येशूले मानिसहरूलाई बताउन हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी के गर्न आवश्यक ती कुराहरू हुन देखिन्छ, अहिलेसम्म हामी सबै पर्याप्त छैन गरिरहेको दोषी महसुस. म सही छु? म एक्लै छु? अझै पनि यो गत हप्ता, म मेरो छिमेकी सँग निर्माण गर्न थाले सम्बन्धको प्रकारको गिर सुरु भएको छ किनभने म दोषी महसुस भएको थियो. म सम्बन्ध मा निर्माण बारे जानिजानि रूपमा भएको छैन रूपमा मैले गर्नुपर्छ, र येशूको बारेमा उसलाई भन जारी प्रयास गर्न. र यो म अक्सर यसरी महसुस जस्तै देखिन्छ. म सोध्न चाहेको प्रश्न किन छ? के हृदय दृष्टिकोण तय गर्न आवश्यक छ? म नवीकरण गर्न मेरो मन चाहिन्छ. म यसलाई गरिरहेको छु किन सम्झना छ.
अब इंजीलवाद डरलाग्दो र कठिन र तनावपूर्ण छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छ. अनि त्यो के हाम्रो हृदय मा जान्छ बस छ. अरूलाई महसुस कसरी के? तिनीहरूले एक मुक्तिदाता को आवश्यकता येशूमा र पापी हुनुहुन्छ भनेर कोही विश्वस्त गर्न प्रयास गर्दै मात्र तरिका हो, हाम्रो "सहिष्णु" संस्कृति गर्न ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा खराब अपराध जस्तै देखिन्छ. यो आपत्तिजनक छ.
त्यसैले हामी किन सुसमाचारको प्रचार गर्नुपर्छ? हामी हाम्रो मुख खोल्न र कसैले सुन्न चाहन्छ. मान्छे यसको लागि हामीलाई घृणा. मान्छे हामी पटक पछि छौं भन्न. मान्छे हामी पुरानो विचार संग पुरानो पुरानो पुस्तक clinging हुनुहुन्छ भन्न. हामी एक अन्धकारमा बस्न, शत्रुतापूर्ण विश्व. त्यसैले किन? हामी हाम्रो समय बर्बाद गर्दै
हामीलाई थाहा Gotta हामी यसलाई गरिरहनुभएको किन, वा हामी हरेस छौँ. हामीलाई जस्तै हुन हामी त हामी सबैलाई जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्छ सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ? हामी bigots गर्ने विचार हामी अरू सबैलाई भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ किनभने यो छ? यसलाई हामीले सबै अपनाउँछन् आशा केही प्रकारको आवश्यक र येशूले के हुनेछ किनभने? कुनै. हामी परमेश्वरको महिमा हेर्न मान्छे चाहनुहुन्छ किनभने हामी सुसमाचार प्रचार. र हामी उहाँको पुत्रमा कि महिमा हेर्न.
यदि तपाईँलाई टाढा एउटा कुरा हिंड्न त्यो हुन. मान्छे महिमा हेर्न सकून् हामी ख्रीष्टको प्रचार.
किन कुरा गर्छ?
तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा बुझ्न छैन किनभने औषधि नशेडी उच्च प्राप्त. Rappers आफ्नो नाम निन्दा र आफूलाई येशूको एक स्तर मा राख्नु, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा बुझ्न छैन. हाम्रो समुदायमा युवा दोस्तों प्रत्येक अन्य गोली, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा बुझ्न छैन. युवा महिलाहरु सम्बन्धमा आफ्नो भरोसा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा बुझ्न छैन किनभने. तिनीहरूले कुनै आशा छ किनभने निराश युवा आत्महत्या, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा बुझ्न छैन. किनभने तिनीहरूले सुसमाचार परमेश्वरको महिमा देखेको छैन र ख्रीष्टमा भरोसा मान्छे नरक जाने. परमेश्वरको विषयमा महिमा देखेर, र हामी तिनीहरूलाई यो हेर्न चाहन्छन्.
जब हामी ख्रीष्टमा परमेश्वरको महिमा को एक झलक प्राप्त, हामी कहिल्यै एउटै हुनेछु. त्यसैले गरेको यो मान्छे अँध्यारो संसारमा परमेश्वरको महिमा देख्न मदत मतलब के विचार गरौं, जहाँ मान्छे पनि उहाँलाई थाहा चाहँदैनन्.
प्रेरित पावलले कस्तो उसलाई र आफ्नो सुसमाचारको पुस्तकमा घृणा गर्ने मानिसहरूलाई सेवा गर्न जस्तै थियो थाह थियो. हामी अक्सर उहाँले यी अक्षरहरू लेख्छन् रूपमा पावलले अप philosophizing आफ्नो खुट्टा संग समुद्र तट मा कहीं बसिरहेका छ कल्पना. कुनै, पावलले वास्तविक कठिनाइ संग वास्तविक संसारमा जीवित - थुप्रै तरिकामा थियो संसार धेरै हाम्रो भन्दा कठिन. र यो पत्र कि सन्दर्भ मा लेखिएको छ.
कोरिन्थका चर्च पावलले दोस्रो पत्रमा विरोधको अनुहार मा एक रक्षा र आफ्नो सेवाको विवरण थुप्रै तरिकामा छ. मलाई साथ गर्नुहोस्2कोरिन्थी 4:1-6.
त्यसैले, परमेश्वरको कृपा गरेर यो सेवाको भएको, हामी हृदय गुमाउनु छैन.2तर हामी लज्जाजनक renounced छन्, underhanded तरिका. हामी धूर्त अभ्यास गर्न वा परमेश्वरको शब्द संग ट्याम्पर गर्न इन्कार, तर सत्यको खुला कथन हामी परमेश्वरको दृष्टि सबैको विवेकको आफूलाई प्रशंसा हुनेछ.3“र हाम्रो सुसमाचार घुम्टो लागेको छ भने पनि, यो ती घुम्टो लागेको छ जो डरावना छन्.4आफ्नो मामला मा यो संसारको परमेश्वरले बेग्लै विश्वास को मन blinded छ, उनीहरूलाई ख्रीष्टको महिमा सुसमाचार ज्योति देखेर देखि राख्न, परमेश्वरको छवि गर्ने छ.5हामी घोषणा के को लागि आफूलाई छैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको, आफूलाई येशूको खातिर आफ्नो सेवकको रूपमा साथ.6परमेश्वरको लागि, जसले यसो भने, "अन्धकार बाहिर हल्का चम्कोस्,"येशू ख्रीष्ट को अनुहार मा परमेश्वरको महिमा को ज्ञान को ज्योति दिन हाम्रो हृदयमा shone छ. (2 कोरिन्थी 4:1-6)
तपाईं सुसमाचारको विश्वास हुनुहुन्छ भने, तपाईं सुसमाचारको सेवकको हुन भनिन्छ गरिएको छ. त्यसैले म पावलको उदाहरण हेर्न चाहन्छु र म अँध्यारो संसारमा सेवाको लागि चार पाठ दर्शाउन चाहनुहुन्छ
म. किनभने मानिसका अस्वीकृति को छूट के (1-2)
तिरस्कार गाह्रो छ. हामी सबै यो अनुभव गर्नुभएको छ. मान्छे निरुत्साहित गर्न को लागि यो प्राकृतिक छ, र चोट, जब उनि कोही आफूलाई वा अरू केही प्रस्ताव र व्यक्ति तल तिनीहरूलाई उत्तेजित गर्दछ. एक नृत्य गर्न एक केटी सोधेर सातौं ग्रेड केटाहरू बाट, कि कलेज मा बनाउन तपाईं लागू, कि काम रही छैन तपाईं त नितान्त चाहन्थे, तिरस्कार कठिन छ.
प्रेरित पावलले सुसमाचार को आफ्नो सेवकाईमा तिरस्कार प्रशस्त र विरोधको सम्हाल्न. त्यसैले धेरै आफ्नो पत्र को धेरै उहाँले आफ्नो चरित्र र आफ्नो विधि र आफ्नो सन्देश रक्षा गर्न बाध्य गर्नुपर्छ भनेर. आफ्नो स्थिति undisputed थिएन.
तपाईं पावलको स्थितिमा रहेको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं कोरिन्थ गए, यो मूर्तिपूजक मूर्तिपूजक स्थान, र तपाईं तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार. तपाईंले तिनीहरूलाई प्रेम. यद्यपि अहिले, केही naysayers तिनीहरूको मन मा शंका बीउ छरिएको छ. तपाईं बारेमा शङ्का, र आफ्नो मनसाय, र आफ्नो शिक्षालाई. त्यसले पीडा दिन्छ.
तर कसरी पावलले प्रतिक्रिया गर्छ? पद हेर 1.
“त्यसैले, परमेश्वरको कृपा गरेर यो सेवाको भएको, हामी हृदय गुमाउनु छैन।”
एक. हृदय नगुमाउने
पावलले हृदय गुमाउनु छैन भन्छन्. उहाँले त्यस्तो विरोधको सामना गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद निरुत्साहित होइन भन्दै गर्नुपर्छ. उहाँले निराश मिल्यो छैन, र हार, र तौलिया मा हालियो वा आफ्नो जीवन दिन अरू केही फेला परेन. उहाँले सेवानिवृत्त छैन र यसको सट्टा एक जादूगर बन्न निर्णय. कुन अचम्मको छ, यो तिरस्कार जस्तै थियो के विचार. विचार सबै पावलले गए. कैद हुनबाट, ढुंगाले हानेर, अस्वीकार. पावलले अझै पनि हृदय गुमाउनु छैन; जो हामी के गर्न परीक्षा हुनेछ ठ्याक्कै के हो.
के तपाईं कहिल्यै कसैसित सुसमाचारको साझेदारी र छन् तिनीहरूलाई यो अस्वीकार? मसँग छ. मानिसहरूले परमेश्वरको आवश्यकता छैन भने जब म पटक सोच्न सक्नुहुन्छ, वा मेरो साथ तर्क र परमेश्वरको वास्तविक थिएन मलाई भन्नुभयो, वा सुरु गर्ने मान्छे अजीब व्यवहार र म तिनीहरूलाई साझेदारी पछि मलाई जोगिन, आक्रामक मलाई मा गुस्सा र मलाई धम्की गर्ने पनि मान्छे. भनेर प्रतिक्रिया तपाईं कसरी प्रलोभनमा पर्दा? शायद तिमी लड्न परीक्षा हुन चाहन्छु, तर म लड्न सक्दैन. हामी सबैभन्दा निरुत्साहित गर्न प्रलोभनमा पर्दा हुनेछ, र परित्याग. कसले ईटा पर्खाल मा चलिरहेको राख्न चाहन्छ?
त्यसैले जब म त्यो हृदय गुमाउनु छैन भन्दै पावलका शब्दहरूले पढ्न. म छक्क छु. म जान्न उसले त्यो गर्छ कसरी चाहनुहुन्छ. उहाँले किन हृदय गुमाउनु छैन? उहाँले यो पद मा यहाँ बताउँछ.
परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको पावलले किनभने सेवकाईको महानता को हृदय गुमाउनु छैन. अध्याय यो दाँया अघि 3, पावलले नयाँ करार सेवाको महिमा बताउँदै समय एक गुच्छा बिताउनुहुन्छ. क्रूसमा यस पक्षमा ती मध्ये एक हुनुको गौरव, येशूको विश्वास मार्फत अनुग्रह द्वारा मुक्तिको प्रचार गर्न प्राप्त.
पावलको प्रोत्साहन सेवकाईमा नै आउँछ, उहाँले कुनै पनि समयमा कसरी सफल महसुस. उहाँले कृतज्ञ उहाँले यसरी सेवा गर्न परमेश्वरको कृपा चुनिएको थियो गर्नुपर्छ. उहाँले विशेषाधिकार प्राप्त महसुस. वास्तबमा, उहाँले यो नयाँ करार सेवाको मोशाको पुरानो करार सेवाको भन्दा पनि अधिक महिमित छ कि बाहिर पोइन्ट. र पावलले यो सबै मानिसहरूको उहाँले यो सेवा भनेर परमेश्वरको कृपा हो भनेर थाह. चर्च मसीहीहरूले घृणा र सतावट मानिस.
परमेश्वरको रूपमा, हाम्रो आनन्द मान्छे सन्देश प्रतिक्रिया कसरी आधारित छैन. सुसमाचारको हाम्रो विश्वास हाम्रो छिमेक मा मान्छे प्रतिक्रिया कसरी आधारित छैन. यो कल नै महिमा आधारित गर्नुपर्छ.
यो कोठा मा मान्छे मोशाले को सेवकाईमा भन्दा बढी महिमित एक सेवकाईमा भाग लिन अकल्पनीय छ. तपाईं बुझ्न गर्छन्? मात्र पर्याप्त आफ्नो राम्रो देख्नुहुन्न किनभने, तर हामी छ जो एक बारेमा तिनीहरूलाई बताउन प्राप्त. हामी एक छ ठीक गर्ने थाहा. हामी मान्छे देख्न परमेश्वरको महिमा अनावरण मदत प्राप्त! हामी परमेश्वरको उपस्थिति मा मान्छे नेतृत्व प्राप्त.
मसीहीहरूले, हामी हृदय गुमाउनु हुँदैन. म हामी हाम्रो संसारको अन्धकारको मा छैन दुःखित पर्छ भनेर मतलब छैन. म मात्र हामी उदास हुनु हुँदैन भनेर अर्थ र तौलिया मा फेंक. उनीहरूले सन्देश अस्वीकार गर्न सक्छौं, तर यो कुनै पनि कम गौरवशाली बनाउन गर्दैन.
अधित्याग छैन. हृदय गुमाउनु छैन.
बी. लज्जाजनक Underhanded तरिका त्याग्न
“तर हामी लज्जाजनक renounced छन्, underhanded तरिका।”
पावलले फोहोर र आत्म-वांछित हुनुको आरोप हुन सक्छ. आफ्नो चरित्र प्रश्न आउन थियो. त्यसैले पावलले आफूलाई बचाव, भन्दै, "कुनै, हामी renounced गर्नुभएको. हामी कुरा लुकाउने हुनुहुन्छ छैन र हामी सञ्चालन बाटो मा slimy हुनुको। "उहाँले तिनीहरूलाई उहाँले सुसमाचारको योग्य एक प्रकारले बस्न चाहन्छ जान्न चाहनुहुन्छ.
उहाँले भन्नुभयो के जस्तै धेरै सुनिन्छ2कोरिन्थी 2:17, "यति धेरै विपरीत, हामी लाभ लागि परमेश्वरको वचन peddle छैन. त्यसको विपरीत, ख्रीष्टमा हामी निष्कपटता परमेश्वरको अघि बोल्न, परमेश्वरले पठाएको मानिसहरू जस्तै।”
पावलले हामी एक निश्चित तरिका मा हाम्रो जीवन बिताउन भनेर सुसमाचारको सेवाको माग बुझ्नुहुन्छ. र हामी त्यसो गर्दा हाम्रो सेवाको समझौता. उहाँले हामी सुसमाचारको घोषणा गर्न सक्दैन भनेर बुझ्नुहुन्छ, र पापको पश्चात्ताप मानिसहरूलाई बताउन, पश्चात्ताप आफूलाई एक जीवन बिना.
हेर्नु, यदि तपाईं मान्छे संग सुसमाचारको साझेदारी गर्दै हुनुहुन्छ, तर ती नै मानिसहरूलाई आफ्नो जीवन भद्रगोल छ हेर्न, तपाईं सुसमाचारको विरुद्धमा काम गरिरहेका छौं. तिनीहरूले यो सुसमाचार त्यो यो हो भन्छन् रूपमा शक्तिशाली हुनु हुँदैन सोच हुनुहुन्छ, कारण त्यो भद्रगोल वा उहाँले भद्रगोल छ.
सी. धोका वा परमेश्वरको वचन संग ट्याम्पर गर्छन्
त्यसपछि पावल यसो भन्छन्, "हामी धूर्त अभ्यास गर्न वा परमेश्वरको शब्द संग ट्याम्पर गर्न इन्कार गर्छन्।" वा रूपान्तरित राख्छ रूपमा, "हामी छलछाम प्रयोग नगर्नुहोस्, न त हामी परमेश्वरको वचन विकृत गर्छन्।”
पावल यसो भन्छन्, उहाँले धूर्त वा गडबड वचन संग हुन इन्कार. उहाँले अझै पनि उहाँले संचालित बाटो रक्षा गर्नुपर्छ. पावलले परमेश्वरको वचन तल परिवर्तन वा पानी वा tampers कुनै कुरा नहीं गर्नेछन्. शायद यो एक स्पष्ट कुरा जस्तै सुनिन्छ, तर यो साँच्चै त स्पष्ट छैन.
म आज थप प्रचार यस संकल्प हुनेछ इच्छा, परमेश्वरको वचन विकृत छैन. धेरै मूर्खता बाहिर त्यहाँ त्यहाँ. तपाईं के चर्चको बारेमा सोच हुनुहुन्छ जब एक भाग हुनुपर्छ, बनाउन तिनीहरूले वचन प्रचार गरिरहनुभएको निश्चित. तिनीहरूले थप्दा निश्चित हुनुहुन्छ वा यसलाई देखि दूर बनाउन. परमेश्वरको वचन बङ्ग्याउन द्वारा आफूलाई लागि धेरै मानिसहरू एक नाम निर्माण गरेका छन्. पावलको त्यो के छैन भन्दै.
मलाई थाहा कहिलेकाहीं हामी सबै यद्यपि यो काम गर्ने प्रलोभनमा पर्दा. तपाईं पास्टर वा शब्द विकृत गर्न एक टिभी प्रचारक हुन छैन. सुसमाचारको संग ट्याम्पर तपाईं परीक्षा हुन सक्छ केही तरिकाहरू के-के हुन्? यसलाई थप स्वादिष्ट जस्तो बनाउने? पापको बारेमा कुरा छैन? होनहार मान्छे कुराहरू येशूले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा थिएन?
यो जस्तै प्रकारको छ. के तपाईं कहिल्यै भोज वा केही मा भएको र तपाईँ तालिका मा तल बस्न र आइस्ड चियाको घूंट लिन र यसलाई unsweetened छ? तपाईं घृणा छैन? unsweetened बरफ चिया पनि किन अवस्थित? कसैले रुचि कि. भनेपछि तिमी के गरछौ त, तपाईं जस्तै लाग्न 18 चिनी प्याकेटहरू र यो मीठो बनाउन प्रयास, किनभने unsweetened चिया मूल्यहीन छ.
त्यसैगरि, मान्छे सुसमाचारको unpalatable रूपमा हेर्न, मानिसहरूको स्वाद तन्तु गर्न मीठो पर्याप्त छैन. त्यसैले तिनीहरू यसलाई थप्न. तिनीहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त यो छुटकारा छैन रूपमा यो ठीक छ रूपमा लामो आंकडा. तिनीहरू केवल यसलाई त्यहाँ मा केहि मिश्रण गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै मान्छे थप गर्न. यो एउटा भयानक कुरा हो! र यो तपाईं साँच्चै सुसमाचार हेर्न कसरी प्रकट गर्छ.
तपाईं यसलाई त्रुटिपूर्ण वा अपर्याप्त छ लाग्छ जबसम्म तपाईं केहि संग ट्याम्पर गर्न आवश्यकता महसुस छैन. परमेश्वरको वचन साथमा गडबड कुनै पनि प्रयास उहाँले बचाउँछ भनेर उहाँलाई मा एक हमला र तरिका हो.
डी. राज्य सत्य स्पष्ट र एक्लै खडे गरौं
“तर सत्यको खुला कथन हामी परमेश्वरको दृष्टि सबैको विवेकको आफूलाई प्रशंसा हुनेछ।”
सुसमाचारको पर्याप्त छ. सीधै र खुल्लमखुल्ला सत्य राज्य. यो जो कोहि professing विश्वास उनलाई झुक्याउन कुनै पनि राम्रो गर्दैन. सत्य थप्दै veils उत्पादन; यसलाई हटाउन छैन. एक महिला एक सुन्दर अनुहार छ भने, किन एक घुम्टोमा यसलाई कवर? यो उनको थप आकर्षक बनाउन गर्दैन; यो उनको साँचो सौन्दर्य लुकाउँछ. त्यसैले यसलाई प्यारा हुनेछ सुसमाचारको मा बनेको राख्न प्रयास नगर्नुहोस्. ख्रीष्टको साँचो महिमा मार्फत चमक भनेर यसलाई छाडा गरौं.
पनि तिरस्कार बीचमा, हामी अधित्याग छैन गर्नुपर्छ. हामी सन्देश contradicts तरिकामा जीवन बिताउन हुँदैन, र हामी जस्तै मान्छे बनाउन प्रयास सन्देश परिवर्तन हुँदैन. हामी सीधै परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई साँचो परमेश्वरको महिमा हेर्न हामी चाहनुहुन्छ किनभने.
तर यो त सजिलो छ. त्यसैले यो उनि सिर्फ यसलाई प्राप्त छैन जस्तै देखिन्छ.
द्वितीय. सैतानको कार्य होसियार हुनुहोस्
हामी शैतानले कसरी काम गर्छ सजग हुनु आवश्यक छ. त्यहाँ उहाँको बारेमा धेरै गलतफहमियहरुलाई छन्. केही मानिसहरू सोच को चरम जाने शैतानले मूलतः सबै शक्तिशाली छ भनेर. हुन्छ कि सबै कुरा उहाँको ठूलो शक्ति को एक परिणाम हो, त्यो गर्न चाहन्छ जब र उहाँले जे चाहन्छ गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि जो अर्को चरम जाने केही छन्. तिनीहरू झूटो शैतानले या त अवस्थित छैन भनेर विश्वास वा उहाँले शक्तिहीन र निष्क्रिय भन्ने. यी अचाक्ली दुवै झूट हो र हामीलाई विश्वास गर्न लागि खतरनाक हो.
सत्य शैतानले शक्ति छैन छ, उहाँले पावल र आफ्नो सेवाको विरुद्ध काम पर्याप्त शक्ति. सुन्नुहोस् पद तीन र चार.
“र हाम्रो सुसमाचार घुम्टो लागेको छ भने पनि, यो ती घुम्टो लागेको छ जो डरावना छन्. आफ्नो मामला मा यो संसारको परमेश्वरले बेग्लै विश्वास को मन blinded छ, उनीहरूलाई ख्रीष्टको महिमा सुसमाचार ज्योति देखेर देखि राख्न, जो परमेश्वरको छवि छ।”
एक. केही सुसमाचारको हेर्नुहोस् नगर्नुहोस्
यो पावलले विरुद्ध आलोचनाएँ को उहाँले केही आफ्नो सन्देश लुकाउने भन्ने थियो देखिन्छ, उहाँले यो देखेर केही मानिसहरू राखन थियो. पावलको प्रतिक्रिया छ, सन्देश केही लुकेका छ भने, यो डरावना छन् कि ती लुकेका गर्नुपर्छ. त्यसको मतलब के हो?
पावलले सन्देश सत्यता देख्न सक्ने मान्छे डरावना छन् जो एउटै मान्छे हो भन्दै छ. यो स्पष्ट छ 1 कोरिन्थी 1:18 जब पावल यसो भन्छन्, "क्रूसमा सन्देश ती मूर्खता गर्ने डरावना हो…" यो तिनीहरूलाई मूर्ख देखिन्छ. त्यहाँ केही मानिसहरू कतै आध्यात्मिक दृष्टि छन्, जो परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास द्वारा बाँच्न, जसले अनन्त जीवन पाउनेछन्, जो पनि सुसमाचारको मूर्ख छ लाग्छ. ती मानिसहरूले अवस्थित छैन.
उहाँले परमेश्वरको थाहा नगर्ने ती दण्ड हुनेछ र हाम्रा प्रभु येशूको सुसमाचार पालन छैन. तिनीहरूले अनन्त विनाश संग सजाय हुनेछ र प्रभुको उपस्थितिबाट र उहाँले आफ्नो पवित्र मानिसहरूलाई महिमा गर्न र विश्वास गरेका सबै माझ मा छक्क परे गर्न आउँछ मा दिन आफ्नो शक्ति को बडाई देखि बाहिर बन्द. (2 थिस्सलोनिकी 1:8-10एक)
यो एक खेल भनेर हामी प्ले छैन. यो सेवाको जीवन वा मृत्यु सेवाको छ. सुसमाचारको को यो सन्देश अस्वीकार गर्नेहरूले, परमेश्वरको अस्वीकार. र उहाँलाई तिरस्कार गर्नेहरूलाई नष्ट हुनेछ र सधैंभरि सजाय.
बी. शैतानले अंधा अविश्वासीहरूले
तर किन यी मानिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ? शैतानले आउँछ जहाँ यो छ. पावलले तिनलाई भनिएको "यस संसारको देव।" त्यसैले उहाँले केही शक्ति छ भनेर स्पष्ट छ, तर सबै शक्ति. उहाँले यस संसारको देव वा यो उमेर भनिन्छ गर्नुपर्छ, र मात्र यो उमेर.
अब हामी थाहा रूपमा शैतानले हामीलाई घृणा गर्छ. धर्मशास्त्र उहाँले निल्न सक्छ कसैलाई खोजिरहेको पृथ्वी वरिपरि prowls भन्छन्. उहाँले परमेश्वरको शत्रु हो (बराबर), र विश्वास गर्न हामीलाई नेतृत्व गर्ने एक परमेश्वरको सत्य सट्टा निहित. त्यसैले पावलले के भन्छ शैतानले यहाँ गर्छ? पावलले यी मानिसहरूले त्यो डरावना छन् भन्छन्, वा उहाँले तिनीहरूलाई भनिएको रूपमा, बेग्लै विश्वास, तिनीहरू शैतान तिनीहरूलाई अंधा किनभने देख्न सक्नुहुन्छ.
यो हाम्रो लागि कसरी अचम्मको र महत्त्वपूर्ण यो हुनुपर्छ प्रमाण परमेश्वरको महिमा हेर्न. सैतानको मुख्य लक्ष्य को एउटा यो देखेर हामीलाई राख्न छ. शैतानले परमेश्वरको महिमा सुसमाचारको पुस्तकमा देख्न गर्न निश्चित गर्न हामीलाई अन्धा रूपमा हालसम्म जान्छ.
परमेश्वरको महिमा के हो? परमेश्वरको महिमा आफ्नो वजन छ, आफ्नो सौन्दर्य, शोभा, बडाई, महानता, र चमक. साथै उहाँको प्रतिष्ठा संग गर्न धेरै छ, renown, र उहाँको मानिसहरूलाई उपस्थिति.
हामीलाई केही सैतानको मुख्य लक्ष्य एक Rapper गरेको एल्बम कलाकृति मा एक पिरामिड वा एक आँखा प्रतीकात्मक रूप हामीलाई अप यात्रा हो लाग्छ. हेर्नु, सैतानको मुख्य लक्ष्य एक र्याप एल्बम संग Illuminati सामेल हुने प्रक्रिया धोखा दिने छैन. सैतानको मुख्य लक्ष्य ख्रीष्टमा परमेश्वरको महिमा देखेर देखि राख्न छ. र हामी मानिसहरू हेर्न चाहन्छन् के. हामी विरुद्ध शैतानले काम गर्दछ. शैतानले हाम्रो शत्रु र ख्रीष्टको कारण को शत्रु हो.
शैतानले हामीलाई परमेश्वरको महिमा श्रद्धा हुन चाहनुहुन्छ गर्दैन. उहाँले हामीलाई यो संसारको Glòries संग enamored हुन चाहन्छ. उहाँले हामीलाई साथ पैसा गाँसिएको गर्न चाहन्छ, र लोकप्रियता, र सिद्ध सम्बन्ध, र सफलता. शैतानले हामीलाई अस्थायी संग यति सन्तुष्ट हुन चाहन्छ, पार्थिव Glòries, हामी परमेश्वरको महिमा हेर्न समय छैन भनेर. उहाँले वास्तवमा हामीलाई अंधा - उहाँलाई हामीलाई अलमल्याउन लागि तर यो पर्याप्त छ.
तपाईं शैतानको तपाईं अन्धा र परमेश्वरको महिमा देख देखि तपाईं रोकते अनुमति गरिएको छ? तपाईं यस संसारको Glòries सट्टा परमेश्वरको महिमा chasing छन्? त्यसो भए, तपाईं आफ्नो हातमा प्ले र गरिरहेको ठ्याक्कै उहाँले हामीलाई के गर्न चाहन्छ. हामी येशूको विश्वास रूपमा किन कि छ, मानिसहरू परमेश्वरको महिमा हेर्न हामी चाहनुहुन्छ किनभने, तिनीहरूले विश्वास थियो कि, र आफ्नो जीवन परमेश्वरको महिमा, सुसमाचार प्रचार.
किन हाम्रो संसार अहिले यति गाढा छ हामीलाई केही आश्चर्य. मानिसहरू किन पापी छन्, एक अर्को तिर घृणित, र परमेश्वरको तिर शत्रुतापूर्ण. खैर यहाँ जवाफ छ. तिनीहरू अन्धा हुनुहुन्छ. शायद तिमी कुनै प्रगति संग वर्ष को लागि एक मित्र वा परिवारको सदस्य साझेदारी गरिएको छ र तिमी थकित हुनुहुन्छ. यो असम्भव देखिन्छ. हामी निराश हुँदैन र मान्छे मा परित्याग. परमेश्वरले तपाईंलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने, उहाँले कसैले बचाउन सक्छ! परमेश्वरले मलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने, उहाँले कसैले बचाउन सक्छ. तिनीहरू अन्धा छन्, र हेर्न आवश्यक. तिनीहरूलाई देख्न मदत.
यो पनि हामीलाई देखाउँछ मान्छे सुसमाचारको अस्वीकार गर्दा, यो एक अन्धा मानिसको तपाईं आफ्नो आँखा मा चमक नोटिस छैन भने एक टर्च त्रुटिपूर्ण छ मतलब भन्दा सन्देश कुनै पनि थप त्रुटिपूर्ण छ होइन. अन्धो मान्छे देख्नुहुन्न.
तिरस्कार नदेऊ तपाईं शब्द शङ्का बनाउन. अन्धा मानिसहरू मोना लिजा छ कति सुन्दर देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई, यो सुन्दर छैन होइन. हामी देख्न सक्छौं पुरुषहरूले मा कला को हाम्रो राय आधार छैन.
सी. येशूले परमेश्वरको छवि छ
पावलले शैतानले देखेर तिनीहरूलाई अंधा भन्छन् "ख्रीष्टको महिमा सुसमाचार ज्योति, जो परमेश्वरको छवि छ। " किन ख्रीष्टको प्रचार मानिसहरू परमेश्वरको महिमा देखाउँछ यो छ, किनभने येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको धेरै छवि छ.
येशूले परमेश्वरको बस एक अगमवक्ता छैन. उहाँ परमेश्वरबाट पठाइएको बस एक मानिस छैन. उहाँ परमेश्वरको बस पुत्र छैन. उहाँ परमेश्वरको धेरै छवि छ. यो कस्तो अर्थ राख्छ? यो हो कि येशूले, परमेश्वरले आफूलाई हुनुको, पिताको सिद्ध प्रतिनिधित्व छ. तपाईं परमेश्वरको प्रेम जस्तै छ के थाहा गर्न चाहनुहुन्छ भने, येशूलाई हेर्न. परमेश्वरको कृपा? येशूले हेर. परमेश्वर पापीहरू कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? येशूले हेर. येशूले शारीरिक रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, सिद्ध छवि.
दृश्य सृष्टिमा परमेश्वरको काम हेर्न, तर ख्रीष्ट येशूको हामी परमेश्वरले आफूलाई छन्, ईम्यानुएल, "हामीलाई परमेश्वरको।" येशू ख्रीष्ट को अनुहार मा परमेश्वरको महिमा भन्दा sweetly conspicuous छ, तपाईं सजग छन् किनभने परमेश्वरको गुण मात्र होइन त्यहाँ छन् कि, तर परमेश्वरले आफूलाई त्यहाँ छ. - चार्ल्स Spurgeon
कुनै एक कहिल्यै परमेश्वरको देखेको छ, तर परमेश्वरले एक र मात्र, जो पिताको छेउमा छ, उहाँलाई प्रकट गरेको छ. (यूहन्ना 1:18)
त्यसैले मानिसहरू ख्रीष्टको महिमा सुसमाचार ज्योति देख्न गर्दा, तिनीहरूले उहाँको महिमा परमेश्वरको हेर्न. शैतानले तिनीहरूलाई भनेर हेर्न चाहन्छन् गर्दैन.
मानिसहरू महिमा हेर्न सकून् हामी सुसमाचार प्रचार. अनि त्यो महिमा येशूको देखिन्छ.
त्यसैले शैतानले blinded छ मानिसहरू, हामी के गर्न मानिन्छ छन्? शैतानले "यस संसारको देव" छ। हामी के उहाँले हामीलाई विरुद्ध आउनुहुनेछ गर्दा के मानिन्छ छन्?
III. मंत्री को कार्य अँगालेको
हामी के गर्न भनिन्छ गरिएको छ के गलत अर्थ लाउनु किनभने इंजीलवाद सङ्घर्ष गर्ने हामी धेरै कारण मध्ये एक छ.
“हामी घोषणा के को लागि आफूलाई छैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको, येशूको खातिर आफ्नो सेवकको रूपमा आफूलाई साथ।”
पावलले यसो भन्दै छ, मानिसहरू मेरा सन्देश अस्वीकार किनभने तिनीहरू ख्रीष्टको देख्न सक्नुहुन्छ. र ख्रीष्टको हामी के प्रचार छ. तिनीहरूले मलाई तिरस्कार छैन, तर उहाँलाई.
एक. प्रचार ख्रीष्टको!
सुसमाचारको सेवकको रूपमा, तपाईं एक प्राथमिक कार्य छ. घोषणा ख्रीष्टको. हामी तल bogged प्राप्त, र भ्रमित, र निरुत्साहित, किनभने हामी मुख्य कुरा टाढा प्राप्त. येशूले मानिसहरूलाई बताउनुहोस्.
जब तपाईं कुनै संग सम्पर्कमा आउन गुमाए गर्ने, आशा बिना, परमेश्वरको बिना र तपाईं के गर्नु पर्छ आफैलाई सोध्नुहोस्. येशूको बारेमा व्यक्तिको भन्नुहोस्. तिनीहरूले आवश्यक के. हो तिनीहरू अन्य आवश्यकता छ. तर मुख्य आवश्यकता आफ्नो येशूले छ.
मानिसहरू परमेश्वरको महिमा हेर्न तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई अन्य कुराहरू प्रचार गर्न कुनै राम्रो गर्छ. अब भन्ने होइन मदत छैन मान्छे राम्रो आफ्नो जीवन बिताउन, यो सिर्फ ख्रीष्टको कि को केन्द्र मा हुन छ मतलब. येशूले जग छैन भने, प्रेरणा, हामीले प्रचार अरू सबै कुरा पछि इन्धन, हामी के गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो छैन.
यो ख्रीष्टको प्रचार गर्न कस्तो अर्थ राख्छ? हामी पाठ बाँकी देखि र अन्यत्र धर्मशास्त्रमा थाहा पावलले सुसमाचार सन्देश संकेत छ कि. पावलले कोरिन्थीहरूलाई भन्नुभयो, "म बाहेक ख्रीष्ट र उहाँलाई क्रूसमा तपाईं बीचमा केही थाहा कटिबद्ध।" पावलले येशूको बारेमा सन्देश र के उहाँले पूरा र कसरी उहाँले बचाउँछ अर्थ.
तपाईं यहाँ राती हुनुहुन्छ र यदि तपाईं थाहा छैन कि सुसमाचारको सन्देश, निस्कनु अघि तब आफ्नो लक्ष्य हुनुपर्छ. सुसमाचारको छ र के तपाईं विश्वास वा छैन के बाहिर आंकडा. यो सुसमाचार सन्देशको कोर मा, परमेश्वरको पवित्र छ कि सत्य हो, मुख्य पापी छ, ख्रीष्टको सिद्ध थियो र पापी लागि मृत्यु, र उहाँले गम्भीर देखि गुलाब. र ख्रीष्टमा पाप र भरोसा देखि बारी गर्नेहरूलाई सुरक्षित गरिनेछ. त्यो तपाईं प्रचार गर्न भनिन्छ गरिएको गर्नुभएको सन्देशको.
तपाईं अरूलाई बचाउन सक्दैन. तपाईं जो मर्न सक्दैन. तपाईं कसैले मन परिवर्तन गर्न सक्दैन. तपाईं मात्र ख्रीष्ट प्रचार गर्न सक्छौं. तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न प्रयास नगर्नुहोस्, एक बारेमा तिनीहरूलाई बताउन गर्ने गर्न सक्छन्. हृदय परिवर्तन गर्न प्रयास नगर्नुहोस्, एक बारेमा तिनीहरूलाई बताउन गर्ने गर्न सक्छन्. तिनीहरूलाई सफा गर्न प्रयास नगर्नुहोस्, एक बारेमा तिनीहरूलाई बताउन गर्ने गर्न सक्छन्.
किन सुसमाचारको? किनभने यो परमेश्वरले मानिसहरूलाई कसरी छान्नुभएको छ छ, जब तिनीहरूले सुसमाचार सुन्न. र यो यस खण्डबाट स्पष्ट छ, परमेश्वरको महिमा स्पष्ट उहाँको पुत्र बारेमा राम्रो समाचार देख्न छ.
बस यो गत हप्ता, म मेरो चर्चमा विश्वासीहरूले दुई करार सुने. यी दुई मान्छे धेरै फरक कथाहरू थियो. एक अप बन्द थियो एक दबाइ बिक्रेता थियो. अर्को एक राम्रो केटी थियो, परमेश्वरले घृणा. ती दुवै सुसमाचारको तिनीहरूलाई धेरै पटक साझेदारी गरेका थिए. र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्. र तपाईंलाई थाहा विश्वास गर्न अन्तमा तिनीहरूलाई सारियो के? अरू कसैको तिनीहरूलाई सुसमाचारको साझेदारी. हामी परमेश्वरको काम गर्न छ जब थाह, वा काम गर्न परमेश्वरले कसरी रहेको छ. हामी सिर्फ हाम्रो काम गर्न आवश्यक. येशूले मानिसहरूलाई बताउनुहोस्, त्यसैले तिनीहरू येशूको महिमा देख्न सक्नुहुन्छ.
हाम्रो लडाइँका हतियारहरू लागि शरीरका छैनन् तर गढों नष्ट गर्न ईश्वरीय शक्ति छ. हामी तर्क नष्ट र हरेक उच्च राय परमेश्वरको ज्ञान विरुद्ध खडा, र ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्न हरेक विचार कैद लिन, हरेक अनाज्ञाकारिताले दण्ड तयार रहेको, जब आफ्नो आज्ञाकारी पूरा. (2 कोरिन्थी 10:5-6)
हामीलाई केही हाम्रो करार साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ, जो राम्रो छ. तर सुसमाचारको वर्तमान छैन जब हामी ख्रीष्टको घोषणा छैनन्, तर आत्म. "म एक crackhead थियो, त्यसपछि म एक राम्रो कथा That's थिएन। ", तर कसरी म बचत गर्न सकिँदैन?!! अर्थ तपाईं कि छैन वा छैन, भनेर आफैलाई प्रचार छ. हामी धेरै कुरा पावलले उहाँले यस खण्डमा के गर्छ भन्छन् गरिरहेका छन्. कृपया आफ्नो गवाही साझेदारी, तर तिनीहरूलाई बताउन तपाईं सुरक्षित कि राम्रो समाचार.
बी. एक दासको सत्य आवश्यकता गर्नेहरूलाई हुन
कुन-कुन तरिकामा तपाईं हाल सुसमाचारको साझेदारी गरिएको छ? कसले तपाईंलाई साझेदारी गरिएको छ? तपाईं नाई कुर्सी मा बस्न गर्दा के कुरा गर्छन्, वा तपाईं प्राप्त आफ्नो बाल गरेको? के तपाईं कुराहरू बारेमा कुरा गर्न केही मिनेट प्राप्त गर्दा आफ्नो छिमेकी वा आफ्नो सहकर्मीहरू भन्छन् गर्छन्?
त्यो शब्द सेवकको रूपमा अनुवाद, शाब्दिक दास अर्थ. उहाँले म प्रभुको रूपमा ख्रीष्टको घोषणा भन्दै गर्नुपर्छ, र आफ्नो दासको रूपमा मलाई, येशूको खातिर. त्यो अचम्मको छ. र यो मात्र समय पावलले यो जस्तै केहि भन्छन् छ.
हुनत म मुक्त छु र कुनै मानिसले हौं, म सबैलाई दास बनाउन, सकेसम्म धेरै जीत. (1 कोरिन्थी 9:19)
तपाईं आफैलाई राम्रो समाचार सुन्न आवश्यक गर्नेहरूलाई को दास बनाउने छन्?
मलाई देखि सुसमाचारको सुन्न कोही लागि, यो सही अवस्था हुन छैन? म आशा. म जानिजानि हुन चाहनुहुन्छ, र पनि अरूलाई ख्रीष्टको भेट्न प्राप्त भनेर आफैलाई असुविधाको.
हामीलाई केही पनि व्यस्त छन्. हामी धेरै काम, वा हामी चर्च धेरै सेवा, र हामी कहिल्यै गैर-ख्रीष्टियनहरूलाई समय बिताउन छैन. म कहिले काँही जस्तो महसुस. तर हामी माथि मौका ख्रीष्टले मानिसहरूलाई बताउन छोड्न हुँदैन. हामी इंजीलवाद वरिपरि हाम्रो जीवन निर्माण गर्नुपर्छ. ख्रीष्टको बारेमा अन्य मानिसहरूलाई बताउन त्यागहरू.
म यो कोठा मा जो आश्चर्य सुसमाचार साझेदारी गर्न अर्को देशमा रहेको छ? त्यहाँ थाहा नगर्ने मान्छे हो. त्यहाँ अन्धा छन् मानिसहरू हुन्. जहाँ शहरी मिसनरीहरूले अन्यत्र जान इच्छुक छन्?
हामी ख्रीष्टको प्रचार, त्यसैले मानिसहरू परमेश्वरको देख्न सक्नुहुन्छ. तर मानिसहरू अन्धा छन् भने ख्रीष्टको प्रचार मुद्दा के हो?
चतुर्थ. आशा परमेश्वरको काममा
संसारको evangelized भइरहेको भने अन्ततः हामीलाई निर्भर, यो शाब्दिक असम्भव छ. हामी अन्धा आँखा खोल्न सक्दैन. हामी के गर्न सक्नुहुन्छ सबै तिनीहरूलाई प्रचार र प्रेम छ. यो असम्भव के परमेश्वरले हामीलाई सोधेको छ गर्न? हुनसक्छ.
प्रेरित 26:18, येशूले पावलले भन्नुहुन्छ, "म तिनीहरूलाई तपाईंले पठाउने छु, आफ्नो आँखा खोल्न र प्रकाश गर्न अन्धकार तिनीहरूलाई बारी, र परमेश्वरको सैतानको शक्ति बाट, ताकि तिनीहरूले मलाई विश्वास द्वारा पवित्र भएकाहरूलाई बीचमा पाप क्षमा र ठाउँ प्राप्त गर्न सक्छ। "
यो कसरी सम्भव छ? मानिस त्यसो गर्न सक्दैन. पद्य सुन्न 6.
“परमेश्वरको लागि, जसले यसो भने, "अन्धकार बाहिर हल्का चम्कोस्,"येशू ख्रीष्ट को अनुहार मा परमेश्वरको महिमा को ज्ञान को ज्योति दिन हाम्रो हृदयमा shone छ।”
एक. परमेश्वरको सिर्जना र नमूना
पावलले परमेश्वरको छ जसले हामीलाई स्मरण गराउन दोस्रो लिन्छ. उहाँले हामीलाई उहाँको ट्रयाक रेकर्ड छिटो सम्झाउने दिन चाहन्छ. यो जो पहिलो पटक अचम्मको कुरा के गर्न प्रयास गर्नुपर्छ परमेश्वर छैन. यो जन्म भएको थियो जो परमेश्वर हिजो छ वा एक लाख वर्ष पहिले. यो सिर्जना गरिएको थियो जो परमेश्वर छैन. यो परमेश्वरको जसको हातमा यस संसारको तथाकथित परमेश्वरले बाँधिएको छैन. परमेश्वरले हामी त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ तर्फबाट अन्य मानिसहरूलाई जाँदै हुनुहुन्छ जसले बिल्कुल केहि देखि बिल्कुल सबै सिर्जना.
उहाँले मात्र शब्दहरू सृष्टिको सबै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भने, उहाँले अन्धा ल्याउन सक्छ, जीवन मृत मानिसहरू.
अन्धो आँखा हाम्रो परमेश्वरको लागि कुनै म्याच छन्. दुष्ट मन हाम्रा परमेश्वर लागि कुनै म्याच छन्. गाढा हृदय हाम्रो परमेश्वरको लागि कुनै म्याच छन्. उसले भन्यो, एक पटक "उज्यालो हुन त्यहाँ गरौं" र उहाँले फेरि भन्न सक्छौं. पावलले गरिरहेको छ बिन्दु हो.
उहाँले प्रयोग कल्पना यो जस्तै छ. हाम्रो मन एक ठूलो कोठा जस्तै हो, कि पिच काला छ. भित्ताहरू बाक्लो छन्. कुनै Windows छन्. कुनै दीपक हो. कुनै रोशनी. अन्तर्गत छिर्न गर्न प्रकाश को लागि कुनै ढोका. यो सबै कोठा कहिल्यै ज्ञात छ बोल्न अन्धकार छ. कसैले भनेर गाढा कोठा बाहिर खडा छ र चीखें ख्रीष्टको प्रभु हुँदा प्रचार छ. तर ज्योति अझै पनि छैन मा आउँछ. तिनीहरूले अन्य पक्ष र चिच्याउनु जाने, उहाँले पापको लागि मर्नुभयो र उहाँले पुगेको छ! अझै पनि कुनै रोशनी. अनि त्यसपछि अर्को समय नै समाचार साझेदारी गरिएको छ, तर यो समय परमेश्वरको कृपा को Wrecking बल ती पर्खालहरु को एक माध्यम मार्फत सम्पूर्ण smashes र तपाईंले कहिल्यै देखेको गर्नुभएको brightest प्रकाश मार्फत चमकता. कुनै पनि कोठा कहिल्यै हुन सक्छ जस्तो कि एक पटक darkened कोठा अब रूपमा उज्ज्वल छ. यो त्यसो गर्न परमेश्वरले लिन्छ.
क्रिश्चियन, के तपाईं येशू को अनुहार मा परमेश्वरको महिमा देखेको छु भने, तपाईं ज्योति गर्न अन्धकार देखि सक्रिय गर्नुभएको छ भने, यसलाई आफ्नो गर्दै छैन. यो अन्ततः तपाईं साझेदारी गर्ने व्यक्ति को गरिरहेका होइन. यो परमेश्वरको गर्दै छ. परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ. जबकि यस संसारको देव येशूको महिमा हामीलाई अंधा, साँचो र जीवित परमेश्वरको हृदय मा प्रकाश चमकता र अन्धो आँखा खोल्छ. र उहाँले यो गर्न उहाँको वचन प्रयोग.
आफ्नो हृदय अब कसरी आफ्नो जीवन मा देखाउँछ darkened छ भने?
सी. कृतज्ञताले नियमित रूपमा येशूलाई खोज्दै
तपाईं परमेश्वरलाई लागि के गर्नुभएको छ बुझ्न गर्छन्? हामी एक धेरै, आफैलाई सहित, इंजीलवाद बारेमा पर्याप्त भावुक छैन, हामी सुसमाचारको पुस्तकमा परमेश्वरको महिमा हेर्न प्राप्त गर्ने पर्याप्त कृतज्ञ हुनुहुन्न किनभने. हामी थप कब्जा थिए भने, र हाम्रा परमेश्वर संग enthralled र के हामी ख्रीष्टमा छ, हामी अन्य मानिसहरूलाई थप बताउन हुनेछ. हामी मन शो को बारेमा तिनीहरूलाई बताउन, र राम्रो एल्बम, र सम्मेलन. हामी येशूको बारेमा तिनीहरूलाई नभन्नुहोस्? जब हामी केहि प्रेम, हामी सहायता गर्न सक्दैन तर अरूलाई साझेदारी.
क्रिश्चियन, परमेश्वरको गर्नुभएको छ के फाइदा लिन. भनेर सुसमाचारको आफूलाई भिजेको, तर परमेश्वरले अझै पनि उहाँको महिमा त्यहाँ देखावटी छ, ख्रीष्टको अनुहार मा. तपाईंले उहाँलाई विश्वास गर्दा यसलाई बन्द गर्दैन. सुसमाचारको विगतका सार्न प्रयास नगर्नुहोस्! हामी सबै भन्दा स्पष्ट परमेश्वरको महिमा हेर्न जहाँ यो छ. यो के धर्मशास्त्रको सबै हामीलाई पोइन्ट छ.
हामीलाई परमेश्वरले कसरी उहाँको प्रेम lavished. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रहको धन पोखे. परमेश्वरले हामीलाई साथ धैर्य प्रदर्शन. परमेश्वरले आफूलाई देखावटी छ. अन्धा मानिसहरू, जसको दृष्टि पुनःस्थापित गरिएको छ blindfolds संग वरिपरि हिंड्न छैन. तपाईं आँखा छ. त्यसैले हेर्न.
जब तपाईं निरुत्साहित हुनुहुन्छ, तपाईं सेवा हुनुहुन्छ जो सम्झना. सुसमाचारको प्रचार गरिरहन. मान्छे महिमा हेर्न सकून् हामी ख्रीष्टको प्रचार.
यो पतित गाढा संसारमा सेवाको कहिल्यै भएको छ, र कहिल्यै सजिलो हुनेछ. तर हामी पावलले सिक्न सक्छौं. हामी सिक्न सक्छौं, पहिलो, छैन अधित्याग गर्न किनभने मानिसका तिरस्कार को. दोस्रो, सैतानको काम सावधान गर्न. तेस्रो, मंत्री को काम अँगाल्न. चौथो, परमेश्वरको काममा आशा गर्न.
म सुसमाचारको रूपमा धेरै म हुनुपर्छ वा कसरी प्रचार छैन छु भने म के गर्छन्? म तिमीलाई निरुत्साहित छोड्न चाहँदैनन्. ख्रीष्टको हेर. म यहाँ प्रोत्साहन छोड्न चाहनुहुन्छ, के मा परमेश्वरले येशूलाई मा तपाईं को लागि गरेको छ. र अरूलाई बताउने उत्प्रेरणा तिनीहरूले नै अनुभव गर्न सक्छन्.
लागि हामीलाई लागि खराब महसुस वरिपरि हिंड्न खम्बा मा त्यहाँ धेरै छ. धेरै खम्बा मा धेरै.
यो जीवन भन्दा हुँदा हाम्रो लागि केवल दुई विकल्प छन्. छैन ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वास छ जसले हामीलाई ती, नष्ट हुनेछ. हामी पापको बारेमा हाम्रो मन परिवर्तन हुनेछ भने, छोडदेउ, र येशूको कृपा मा आफूलाई फेंक, हामी सधैंभरि विनाश सहन छौँ.
तर हामी बारी र ख्रीष्टमा भरोसा भने, हामी ख्रीष्टको सुसमाचार अहिले उहाँको महिमा को एक झलक हेर्न प्राप्त. अनि पछि, उहाँले फिर्ता पछि, हामी सबै नयाँ शरीर प्राप्त हुनेछ. अनि हामी पूर्ण उहाँको महिमा हेर्न हुनेछ, सधैंभरि. त्यो भव्य छ. त्यहाँ खम्बा मा धेरै छ. मानिसहरू सधैंभरि परमेश्वरको महिमा हेर्न सकून् सुसमाचारको प्रचार गरिरहन.
येरेद Duba • अगस्ट 22, 2013 मा 1:55 बजे • जवाफ
म पैतृक थियो र तपाईँ यो सन्देश प्रचार सुने. म साँच्चै प्रचार मा जोड सराहना र यसलाई उजागर थिए यति धेरै मान्छे प्रोत्साहन थियो. यो पनि convicting र व्यक्तिगत मेरो प्राण गर्न edifying थियो. धन्यवाद, ब्रो!
अनुग्रह & शान्ति,
जे • अगस्ट 22, 2013 मा 8:35 बजे • जवाफ
को बेघर मसीहीहरूले सम्झना म बारेमा मान्छे तपाईं भन्नुभयो? तिनीहरूले मदत चाहिन्छ।. कुनै पनि मद्दत ठूलो मान्छे हुने. परमेश्वरको प्रदान गर्नेछ तर जहाँ कुनै विश्वास येशू पनि काम गर्न सकेन. ला सबैलाई किनभने विश्वास को आफ्नो कमी को आफ्नो पीठ मोड़. राज्यको समर्थन र दिन दिन्छ के हामी गर्न सक्छन्. तिनीहरू पनि र संगीत के आत्मा साँच्चै आफ्नो गीत मा बताइएको. साथै भन्ने हल्ला फैलिन दिन्छ! हामी राज्य y'all लागि यो. इमेल livin4christ4lyfe@gmail.com .. को भाइहरू मदत दिन्छ. सबैलाई माया. र यात्रा, कृपया सहयोग गर्नुहोस्।. तपाईं आफ्नो फल हेर्न चाहनुहुन्छ भने।. बाहिर YouTube.com/livin4christ4lyfe जाँच ..
PJMadsen • अगस्ट 23, 2013 मा 4:43 छु • जवाफ
वाह! त्यो साँच्चै राम्रो थियो! म मेरो साथी साझेदारी गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन! धन्यवाद! म तपाईंलाई सुन्न र यसलाई YouTube मा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो…र पनि प्रवचन पढ्न यात्रा ली भिडियो तल यसलाई भनेझैं! “परमेश्वरले हामीलाई सबैको आशीर्वाद।”
उल्लेख: ओह यू preachin' अब? @ TripLee116 जनता गर्न शब्द ल्याउँछ ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • अगस्ट 23, 2013 मा 8:22 बजे • जवाफ
उत्कृष्ट सन्देश. खैर लिखित र विवरण सरल छ. जहाँ सदस्यता छ बटन? म आफ्नो पोस्ट पाउन सबै मेरो पृष्ठ स्क्रोल गर्न चाहँदैनन्. :-) म यसलाई सम्झना सक्छ.
SdoubleU • अगस्ट 24, 2013 मा 6:14 बजे • जवाफ
यो सन्देश लागि धन्यवाद. यो म साँच्चै सुन्न आवश्यक कुरा थियो. यो वेबसाइट मलाई ठूलो प्रोत्साहन गरिएको छ. परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ!
Amarie • अगस्ट 25, 2013 मा 9:02 छु • जवाफ
म unsweetened आइस्ड चिया looooooooooooove! ;-)
डीजे • सेप्टेम्बर 11, 2013 मा 6:43 बजे • जवाफ
म, यात्रा! धन्यवाद यार! तपाईंको सन्देश वास्तवमा मलाई पुन: प्रेरित. म त हाल निरुत्साहित गरिएको छ र यो सिर्फ मदत.
आवासीय अंधा • जुलाई 23, 2019 मा 7:07 छु • जवाफ
सूर्यका मा अवलोकन गरेका प्रेम थियो.